Sanyiin raammoo haaraan midhaan nyaattu kan “Armyworm” jedhaman - biyyoota Afrikaa 21 keessa babal’achuun, midhaan nyaataa ardittii akka Boqqollootti sodaa guddaa uumuu ishee, Dhaabbaatni Misooma Sadarkaa Addunyaa ka Tokkummaa Mootummootaa beeksisee jira.
Gorsaan gameessi Baayooteknooloojii, ka USAID – Jooseef Hiyuusing akka jedhanitti, hoomaan raammoo kun, bakka dur jiraatan kutaa Yunaayitid Isteets – Flooriidaa yokaan biyyoota Kaaribiyaan irraa ka’uudhaan, biyyoota Afrikaa hedduutti bobba’anii midhaan mancaasan.
“Naayijeeriyaa fi Gaanaa irraa eegalanii hanga Itiyoophiyaatti bobba’an. Dhiheenya kana, baatii Waxabajjii keessa, homaan raammoo “Armyworm” jedhamu kun Sudaan Kibbaa keessa buufatee ture.
Hoomaan raammoo kun, qonnaa Afrikaa irra miidhaa hamaa geessisuu isaa kan dubbatan – Mr. Hiyuusiing, “raammoon kun yoo ooyruu boqqollootti bobbaate, ija midhaanichaa dhibba irraa harka soddoma nyaattee fixxi” – jedhu.